12 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဂီတနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 12 ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဂီတနေရာများ
ကြယ်အောက်ရှိအံ့မခန်းဖွယ်ရာရှေးခေတ်ပြဇာတ်ရုံမှသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကြော့ခန်းအထိရှိသည်, ဤ 12 အကယ်၍ သင်သည်အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေပွဲများကိုအမှန်တကယ်ခံစားလိုပါကကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဂီတကွင်းများသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ရှန်ဟိုင်း, ဘာလင်, လန်ဒန်, နှင့်အီတလီသည်သင်၏နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သောဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးနေရာများသာဖြစ်သည်.
1. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဂီတနေရာများ: လန်ဒန်မှာတော်ဝင်အဲလ်ဘတ်ခန်းမ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးဘုရင်မကြီးတစ်ပါးဖွင့်လှစ်သည်, ဘုရင်မဗစ်တိုးရီးယား, လန်ဒန်ရှိတော်ဝင်အဲလ်ဘတ်ခန်းမ, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးဂီတနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. မင်းဝင်လိုက်တာနဲ့မင်းဟာတော်ဝင်မင်းသမီးဆိုတာကိုချက်ချင်းသဘောတူလိမ့်မယ်. မီးထွန်းသောအခါအပုံစံကနေလေထုအထိ, ဒီမှာဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကမင်းကိုငန်းသီးတွေပေးမှာပါ.
မှစ. 1871 အားလုံးစတိုင်များမှဂီတပရိသတ်များ, များအတွက်တော်ဝင်အဲလ်ဘတ်ခန်းမတက်ရောက်ရန် 365 ရက်ပေါင်း. ဒါကြောင့်, မင်းကဂျက်ဇ်လား, ကျောက်, သို့မဟုတ်ဂန္ထဝင်ဂီတပန်ကာ, တော်ဝင်အဲလ်ဘတ်ခန်းမတွင်တိုက်ရိုက်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲသည်သင်လန်ဒန်၌ရှိစဉ်လက်လွတ်မသွားချင်သောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်. တော်ဝင်အဲလ်ဘတ်ခန်းမသည် Kensington တောင်ပိုင်းတွင်ရှိသည်, ၎င်းကိုပိုက်ဖြင့်အလွယ်တကူရနိုင်သည်.
2. လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ O2 Arena
ငါတို့ရဲ့ဒုတိယအကောင်းဆုံးဂီတနေရာ 12 ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဂီတကွင်းများသည်လန်ဒန်ရှိ O2 Arena ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ဥရောပရှိအကြီးမားဆုံးသောတေးဂီတနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ကမ္ဘာကြီး, တစ် ဦး အဘို့အအခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူ 20,000 ပရိသတ်. ထို့အပြင်, တွင် 2008 Madison Square Garden ၏လက်မှတ်အရောင်းထက်ပင်ကျော်လွန်ခဲ့သည်.
မင်းသား, Cirque Du Soleil, Alicia သော့ချက်များ, နှင့် Brit ဆုပေးပွဲ, O2 Arena တွင်သင်ပျော်မွေ့နိုင်သောတေးဂီတဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်. လန်ဒန်၏ဗဟိုအပြင်ဘက်ကိုသွားရန်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်, ဂရင်းနစ်သို့, ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးဂီတအတွေ့အကြုံသည်, ကလုပ်ရတဲ့လုံးဝတန်ဖိုးရှိသည်.
3. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဂီတနေရာများ: ဗီယင်နာရှိ Musikverein, သြစတြီးယား
ပြီးပြည့်စုံသောဂီတသေတ္တာအဖြစ်ဖန်တီးထားသည်, ကြော့ရှင်း၏ယုဂျ, အဆိုပါ Wiener Musikverein, သို့မဟုတ်ဂီတအသင်း, ဥရောပရှိအန္တိမဂန္ထဝင်ဂီတနေရာဖြစ်သည်. ဗီယင်နာအတွေးအခေါ်ပညာ၏နေအိမ်, ဂီတခန်းမကို ဂန္ထဝင်ပုံစံဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ ဥရောပဘုရားကျောင်းပုံစံ, Apollo ၏ Frescos နှင့်အတူ.
364 တစ်နှစ်ရက်ပေါင်း, ကမ္ဘာတဝှမ်းမှဂီတချစ်သူများ, မမေ့နိုင်စရာနှင့်မမေ့နိုင်သောဂီတအတွေ့အကြုံအတွက်ဗီယင်နာသို့သွားပါ. ဗိသုကာကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အသံပညာ, ဂီတ, တည်နေရာ, နှင့်လေထု, အဆိုပါ Musikverein ၏ထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ် 12 ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဂီတကွင်းများ.
4. အီတလီရှိ Verona Arena
အဆိုပါ 12 ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဂီတကွင်းများသည်မော်ကွန်းအော်ပရာပြဇာတ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားရမည်. Verona Arena ကိုပထမရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်, သင်တို့သည်ယနေ့တည်ကြည်လျှင်၊, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအော်ပရာပရိတ်သတ်များကိုလက်ခံကျင်းပခြင်း.
Verona Arena သည်အပြင်ပန်းကျောက်တုံးကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်၎င်း၏နံရံများကသင့်အားဂလက်ဒီယာ၏ပုံပြင်များကိုပြောပြလိမ့်မည်. ဘဲဥပုံပုံသဏ္theာန်သည် Verona နယ်ပယ်အားအီတလီဂီတဖျော်ဖြေပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သည်. အဆိုပါအသံပညာ, ညဉ့်အခါ lit နေရာ, ၎င်းသည်ဥရောပရှိအထူးဂီတနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
ရထားနှင့်အတူ Verona မှရထားနှင့်အတူ
Florence မှရထားနှင့်အတူ Verona သို့
5. ပေကျင်းမှာရှိတဲ့အနုပညာများအတွက်အမျိုးသားစင်တာ, တရုတ်နိုင်ငံ
ကြက်ဥပုံသဏ္.ာန်, ခေတ်သစ်အနုပညာ အပိုင်းအစ, အမျိုးသားဖျော်ဖြေရေးအနုပညာစင်တာသည်ပေကျင်းရှိအထင်ရှားဆုံးအဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်. ဗဟိုရဲ့ထူးခြားတဲ့ပုံစံအပြင်၌, ပတ်လည်မှာအတုရေကန်ရှိပါတယ်.
ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာဆိုင်ရာအမျိုးသားစင်တာသည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အော်ပရာနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲများတွင်ပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျရိုးရာတရုတ်ဂီတစွမ်းဆောင်ရည်ပိုနှစ်သက်လျှင်, ထို့နောက်ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမသည်စံပြနေရာဖြစ်သည်.
6. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဂီတနေရာများ: ပြင်သစ်တွင် Nimes ၏ Arena
ရှေးအကျဆုံးရောမပွဲကြည့်စင်သည်ထူးခြားသောအရေအတွက်အထိလက်ခံနိုင်သည် 24,000 ဂီတချစ်သူများ. ဒီအံ့သြဖွယ်တေးဂီတကွင်းသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း thousands ည့်သည်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်သည်, ပြင်သစ်၌အများဆုံးစိတ်ကို - မှုတ်ဂီတဖြစ်ရပ်များအချို့ရန်.
ခေတ်ပြိုင်ကန်ပေါ့ပ်မှသည် Hans Zimmer အထိ, တိုက်ရိုက်ဂီတဖြစ်ရပ်များ Nimes ၏ Arena အတွက်မမေ့နိုင်သောဖြစ်ကြသည်. ညဉ့်အခါရောင်စုံအလင်းအိမ်ထဲမှာထရံနှင့်အတူ, အပေါ်အသံစနစ်များကို – ဒီမှာတစ် ဦး ကဖျော်ဖြေပွဲအမှန်တကယ်လျှပ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်.
ပဲရစ်တစ် ဦး ကရထားနှင့်အတူ Nimes ရန်
တစ်ရထားနှင့်အတူ Nimes မှ Montpellier
ရထားနှင့်အတူ Nimes မှမာဆေး
တစ်ရထားနှင့်အတူ Nimes မှ Nice
7. ဘာလင်အတွက်သစ်တော groyne
အိုလံပစ်ပန်းခြံတွင်တည်ရှိသည် ပါတီမြို့ဘာလင်, Waldbuhne သည်လေပြင်ပပွဲရုံတစ်ခုဖြစ်သည်. ပုလဲ Jam, ဘာလင်ဒhန, နှင့်တေလာဆွစ်ဖ်သည်ကြီးမားသောဂီတနေရာ၌ဖျော်ဖြေပွဲများပြုလုပ်သောအနုပညာရှင်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်.
Waldbuhne ကိုအိုလံပစ်အားကစားအတွက်ပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့သည် 1934, သို့သော်ထိုအချိန်မှစ။ တ ဦး ဖြစ်လာသည် 12 ဂျာမနီမှာအကောင်းဆုံးဂီတနေရာများ, ကမ္ဘာကြီး. သငျသညျကံကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပါတယ် 20,000 တိုက်ရိုက်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲသို့တက်ရောက်သူများ, သစ်တောများကဝိုင်းရံ. ဤစိတ်ကူးဂီတနေရာသည်နှစ်များအတွင်းမော်ကွန်းဖျော်ဖြေပွဲများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်, ဒီတော့ခင်ဗျားကဂျာမနီမှာကျင်းပမယ့်ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ဂီတပွဲမှာဂီတသမိုင်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်.
8. Yuyintang ရှန်ဟိုင်းတွင်, တရုတ်နိုင်ငံ
ငါတို့ 12 အကောင်းဆုံးဂီတနေရာများစာရင်းသည်တရုတ်ပြည်၏ထိပ်တန်းမြေအောက်ဂီတကလပ်နှင့်မပြည့်စုံပါ. ရှန်ဟိုင်းရှိ Yuyintang သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားဂီတနေရာများနှင့်မတူပါ, ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဒါဟာရင်းနှီးမှုပါ, နှင့်တ -of-a-kind, ဒါကြောင့်သင်တစ် ဦး မော်ကွန်းဂီတညဥ့်၌ရှိကြ၏. လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှရော့ခ်ပရိတ်သတ်တွေ, Yuyintang ကလပ်ကိုနောက်ဆုံးရသူတို့၏အကောင်းဆုံးရော့ခ်ကလပ်စာရင်းတွင်ထည့်သွင်းပါ 10 နှစ်ပေါင်း. ထိုကွောငျ့, အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်အပြင်ပန်းအသွင်အပြင်ရှိချင်မှရှိလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်အသံနဲ့ Vibes သငျသညျတုန်စေပါလိမ့်မယ်.
9. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဂီတနေရာများ: Salzburg ခုနှစ်တွင် Felsenreitschule, သြစတြီးယား
သင်အတွက်လက်မှတ်တစ်ခုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်သည့်အခါ Salzburg ပွဲတော်, ဘယ်မှာသူတို့ကဂီတ၏အသံရိုက်ကူး – သင်ဤဂီတနေရာမယုံနိုင်စရာဖြစ်သေချာနိုင်ပါတယ်. အဆိုပါ Felsenreitschule သည် Baroque ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောဂီတခန်းမဖြစ်သည်, နှင့် 96 စင်မြင့်နောက်ကွယ်မှ Arcade.
ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကာလအတွင်း, အကာရံထားသော Arcade အရောင်များကို illuminated နေကြသည်, ပို။ ပင်ပရိသတ်ကို captivating. မည်သို့ပင်သင်၏ဂီတကြိုက်နှစ်သက်မှု, သြစတြီးယားမှာပြပွဲ Felsenreitschule အားလုံးအာရုံများအတွက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် – ဂီတပြုမူခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်သင့်တယ်အတိအကျဘယ်လို.
10. Taormina ခုနှစ်တွင်ရှေးပြဇာတ်ရုံ, အီတလီ
Calabrian ကမ်းခြေကိုလှမ်းမြင်ရ, Taormina ရှိရှေးဟောင်းပြဇာတ်ရုံသည်ဘီစီ ၃ ရာစုခန့်တွင်ဂရိများကတည်ဆောက်ခဲ့သည်. အဆိုပါအံ့မခန်းပြဇာတ်ရုံ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအလွန်အံ့သြဖွယ်ဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်ခဲ့သည်.
ပင်လယ်နှင့်မြေများကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်းများနှင့်အတူ, သင်သည်ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်အံ့အားသင့်ဖွယ်အကောင်းဆုံးဂီတနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, သံစုံတီးဝိုင်းများအတွက်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူ, သိပ်ပြီးမ, အဆိုတော်တွေ, ဒီရှေးခေတ်ပြဇာတ်ရုံဟာနေဝင်ချိန် (သို့) နေထွက်တဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတပွဲများအတွက်အံ့မခန်းဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်.
11. Shanghai ရှိ Mao Livehouse
အီလက်ထရောနစ်မှပေါ့ပ်တီးရန်, Mao Livehouse သည်ရှန်ဟိုင်းတွင်အကြီးဆုံးဂီတနေရာဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, သငျသညျရှန်ဟိုင်းညဥ့်ဘဝနှင့်ဂီတမြင်ကွင်းတစ်ခု၏အကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံခံစားလိုလျှင်, ထို့နောက် Mao Livehouse သည်ဒေသခံများနှင့်ခရီးသွား for ည့်သည်များအတွက် IT နေရာဖြစ်သည်.
Mao Livehouse တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌အသံစနစ်ကောင်းမွန်သည်, ကအကောင်းဆုံးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဂီတနေရာအောင်, သင်၏ဆံပင်ကိုချပြီးကျောက်တုံးကိုချထားပါ.
12. ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးဂီတနေရာများ: လိမ္မော်ရောင်ထဲမှာရှေးပြဇာတ်ရုံ, ပြင်သစ်
လိမ္မော်ရောင်ရှိရောမပြဇာတ်ရုံသည်အေဒီ ၁ ရာစု မှစ၍ ဂီတပရိတ်သတ်များကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သည်. လိမ္မော်ရောင်မြို့တွင်တည်ရှိသည်, အိမ်ရှင်ဖျော်ဖြေပွဲ, နှင့်ပြင်သစ်တွင်နှစ်စဉ်နွေရာသီအော်ပရာပွဲတော်.
သင်တစ် ဦး ဖြစ်နိုင်ပါတယ် 10,000 ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားသည့်ပြဇာတ်ရုံတွင်မမေ့နိုင်သောဂီတဖျော်ဖြေမှုကိုခံစားနေရသူများ. လိမ္မော်ရောင်ပြဇာတ်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည် ရထားစီးသွားပြီ မာဆေးကနေ, ဒါပေမယ့်ရထားလမ်းတိုကသင့်ကိုသမိုင်းမှာပြန်ပို့ပါလိမ့်မယ်, ရောမခေတ်, နှင့်ဂီတလောကရှိအကောင်းဆုံးအံ့သြဖွယ်ဖျော်ဖြေပွဲရန်.
တွင် တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏အံ့သြဖွယ်အားလပ်ရက်ကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် 12 ရထားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဂီတကွင်းများ.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဂီတနေရာ ၁၂ ခု "ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-music-venues-world%2F%3Flang%3Dmy့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, / ja သို့ / ru သို့ / / de နှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုသင်ပြောင်းနိုင်သည်.
BestConcertsEurope BestMusicVenuesInTheWorld ဖျော်ဖြေပွဲ LiveMusicEurope ဂီတ တေးရေး